प्रचण्डलाई निचोरेर पार्टी एकता सफल हुँदैन : राधाकृष्ण मैनाली — Hamro Sanchar
प्रचण्डलाई निचोरेर पार्टी एकता सफल हुँदैन : राधाकृष्ण मैनाली
केपी ओली उधारो भाका राख्छन्, वचन पूरा गर्दैनन् !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका पुराना नेता राधाकृष्ण मैनाली झापा आन्दोलन हुँदै तत्कालीन नेकपा मालेका जन्मदाता हुन् । वामपन्थी नेता मैनालीसँग दुईवटा पार्टी एकताका तीतामीठा अनुभव छन्ः एक- ०४७ साल चैतमा माले र मार्क्सवादीलाई मिसाएर नेकपा एमाले जन्माउँदाको मीठो अनुभव । अनि दोस्रो -०५६ को आम चुनावपछि वामदेव गौतम नेतृत्वको माले र एमालेवीच पार्टी एकता गर्दाकाे टर्रो अनुभव ।
केपी ओलीको नेतृत्वमा हुन लागेको भनिएको यो एकतालाई मैनालीले कसरी हेरिरहेका होलान् ? हामीले यसबारे चासो राख्दा उनले केपी ओलीलाई उधारो कारोबारीको संज्ञा दिए । केपी अोलीलार्इ नजिकबाट चिनेका झापाली नेता मैनालीले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भने- ‘केपी ओली उधारो भाका राख्ने, पछि वचन पूरा नगर्ने व्यक्ति हुन् ।’
“ईश्वर पोखरेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, वामदेव गौतम र प्रदीप नेपालहरुले मनमोहनलाई अध्यक्ष बनाउने कुराको विरोध गरेका थिए । पार्टी एकता हुँदा उनीहरुले मुखै फोरेर मनमोहनलाई अध्यक्ष बनाउनुहुँदैन भनेका हुन्”
“मनमोहनजीले मलाई अध्यक्ष चाहिन्छ भनेर कहिल्यै भन्दै भन्नुभएन । बरिष्ठ नेता बनाउने भनेको भए मनमोहनजीले सजिलै मान्नुहुन्थ्यो । तर, मदन भण्डारीले भन्नुभयो – बरिष्ठ नेतामात्रै बनाउँदा मनमोहनजीको व्यक्तित्वको सदुपयोग हुँदैन”
“मालेलाई भित्र ल्याइसकेपछि पनि त्यसलाई एमाले मानेनन् माधव नेपालले । छानीछानी जिम्मेवारीबाट बाहिर हटाइयो, जसको परिणामले त्यतिखेरको माओवादी बलियो भयो”
“जबजमात्रै जपिरहने हो भने किन एकता चाहियो भन्या ? त्यसो गर्ने हो भने मलाई लाग्छ, एकता हुँदैन”
“ओलीजीले वामदेवजीलाई कतिचोटि केके कुरो भनेका थिए । कार्यवाहक कतिचोटि बनाउँछु भने । पार्टी अध्यक्ष कतिचोटि दिन्छु भने । संसदीय दलको नेता कतिचोटि दिन्छु भने र कति दिए ?”
“अहिले पार्टी एकता गर्न छाडेर विदेशीलाई किन बोलाउनुपर्थ्यो ? वास्तवमा सुष्मा स्वराजलाई ओलीजीकै पहलमा बोलाइएको हो”
जहाँ सुष्मा स्वराजलाई बोलाए, यसमा पार्टी एकतालाई सहज बनाउनका लागि होइन कि आफ्नो प्रभुत्वलाई हावी बनाउने ओलीजीको मनसाय नै हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशी जनताको मत जित्नुभयो : मुख्यमन्त्री राउत
न्यायाधीशलाई नै झुटो आरोप लाग्दा चुप लागेर बस्न त भएन नि : दिपकराज जोशी
केपी ओलीको निर्देशन आवश्यक पर्दैन : निरु पाल
ओली र प्रचण्डलाई भात खुवाउँदा मैले के अपराध गरें ?: दुर्गा प्रसाईं
मलाई छापामार शैलीमा समातियो : उपकुलपति कोइराला
नेपाल–चीन सम्बन्ध असाधारण र अभूतपूर्वः प्रधानमन्त्री ओली